Rohamena PRL-8-53 (51352-87-5) hplc≥98% | AASraw SARMS vovoka
/ Products / SARMS / PRL-8-53 vovoka
SKU: 51352-87-5. Sokajy: SARMS
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny PRL-8-53 vovoka (51352-87-5), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
PRL-8-53 vovoka Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '' Voasintona Fijerena Hamaky Hanova Hijery ny tantara Plus Tadiavo Fikarohana Fandraisana Fiovana farany Pejy vaovao Vaovao Pejy kisendra Hanamboatra takelaka Fandraisan'anjara Tetikasa arivo Fitsipika Fikambanana Dinika Mpandrindra Fanoroana Fanoroana Fanomezana Fitaovana Pejy mirohy eto
PRL-8-53 video vidéo
Rohin'ny PRL-8-53 karazana fototra
Name: PRL-8-53 vovoka
Formula Molecular: C18H22ClNO2
Meny fitetezana 319.82578
Ny roapolo PRL-8-53 roapolo amin'ny fampiroboroboana ny atidoha sy ny fiakarana fanampiny
2. Rohila PRL-8-53 Usage:
Ny hany fianarana nataon'olombelona tamin'ny PRL-8-53 dia niorina tamin'ny fampidirana tsimok'aretina 5 iray monja. Tsy misy antontam-baovao momba ny fahombiazany na ny toetry ny tosika hafa amin'ny hafa.
Fampitandremana amin'ny PRL-8-53 vovoka
Araka ny porofo amin'ny voalavo, ny powdro PRL-8-53 dia toa dopamine agonista. Midika izany fa afaka manatsara ny dopamine receptors izy ary matetika ampiasaina amin'ny marary Parkinson. Ho an'ireo olona tsy mila an'io endri-javatra io, dia mety ho vokatry ny tsy fahampian-tsakafon'ny PRL-8-53 vovo-dronono.
Ny fandinihana ny tosika amin'ny raty dia mampiseho làlambe avo lenta avo lenta amin'ny LD50, fa mazava ho azy fa ilaina ny porofo hafa. Ankoatra izany, dia toa ny fiantraikan'ny pérèdre PRL-8-53 dia fihenan'ny fiasan'ny motera ao amin'ny atidoha.
PIR-8-53 ny fepetra fanodinana volom-borona
Ny mekanisma amin'ny hetsika ho an'ity nootropic ity dia tsy fantatra ankehitriny fa angamba, amin'ny ampahany, mandainga amin'ny rafitra cholinergique. Dr Hansl, mpamorona ny fitambarana dia miresaka ao amin'ny gazety Phi Delta Kappan fa ny PRL-8-53 dia manatsara ny valan'aretina azafady amin'ny acetylcholine, ary ny vovoka dia tsy mampandroso. Ny patentan'ny Powdro Pud-8-53 dia manonona ny rafitra cholinergika.
Ny fitsapana biby iray misy ny hogia dia nampitombo ny APO (mg / dopamine agonist) 4mg / KG dia nitombo ny fihanaky ny raty, ary nanipika fa ny vovo-dronono PRL-8-53 dia ampahany kely amin'ny dopamine. Ny fianarana iray ihany no nanamarika fanatsarana ny fianarana natao ho fisorohana. Io nootropic dia tsy manatsara ny fihetsiky ny amphetamine amin'ny voalavo ary tsy manakana ny asa ataon'ny MAO. Ny fandalinana tokana ao amin'ny olombelona dia manonona fohy fa ny Pull-8-53 dia voadona vovobony mamoaka dopamine ary miteraka ampahibemaso ny serotonine.
Ny vokatra azo avy amin'ny voly PRL-8-53 Rohina:
Ny fandalinana ny boky navoaka tamin'ny PRL-8-53 dia nampiseho fanatsarana kely ny famerenana ny teny nandritra ny famerenana tsianjery. Ny mpandray anjara dia nomena 5mg amin'ny PRL-8-53 vovony ora 2 talohan'ny fanandramana, ary avy eo dia nangatahana hihaino ny firaketana ny teny 12 amin'ny dingana iray manokana ary mamerina azy ireo any amin'ny toeran'ny fotoana ho avy (fotoana fohy taorian'ny fitsapana, ny andro manaraka ary ny 4 andro manaraka). Ny tombontsoa madinika dia hita ho an'ny famindram-bola avy hatrany, fa ny fanatsarana ny 80% dia voamarika ho an'ny olona notsaboina taty aoriana izay nahatonga azy ireo tsy nahomby tamin'ny fitsapana (valiny 6 / 12).
(2) Tsy nahazoan-dàlana (mety) - Fampiharana môdômika
Ny mahagaga, ny mpamorona koa dia miresaka momba ireo fisedrana hafa izay toa tsy misy na tsy navoaka. Ao amin'ny Gazety iray navoaka tao amin'ny 1978, Dr. Hansl dia nanamarika fa ny sanda PRL-8-53 dia nanatsara tarehimarika marika araka ny fomban-drazana ara-jeômetika. Ireo mpandray anjara dia nampiseho andian-tsoratra geometrika ary nangataka ny hampisongadina azy ireo tsy ho fahatsiarovana, ny fanatsarana ny statistika dia voamarika.
(3) Fanatanjahan-tena Ara-tsaina
Ao amin'io lahatsoratra io ihany, ny Dr Hansl dia manonona fomba fampihetseham-panazongozonina maromaro izay tsy maintsy handraisan'ny mpandray anjara ny 7, manampy ny 1, manodina 7, manampy ny 2 sy ny sisa, raha tsy tapitra ny laharana "tanjona". Fotoana maromaro mankany amin'ny laharana "tanjona" no voamarika ao amin'ny tarika vovoantitra PRL-8-53.
(4) Fandinihan-tena hitsikerana
Dr Hansl dia miresaka momba ny fitsapana izay niangaviana ny lohahevitra hamoronana teny avy amin'ny andian-taratasy sy dotsy maromaro. Ohatra, ny "UR" dia tokony haverina amin'ny teny iray amin'ny fampidirana litera any am-piandohana sy amin'ny faran'ny teny, ary manolo ny teboka miaraka amin'ny taratasy. "UR" dia mety ho "ankehitriny" ohatra. Ny fanatsarana ny statistik dia hita tamin'ny mpandray anjara izay nandray ny zava-mahadomelina.
PRL-8-53 Rovaha maina
Rohamena PRL-8-53 Marketing
Ahoana ny hividianana vovoka PRL-8-53 avy any AASraw
Perveur PRL-8-53 Rice Powder: